सत्यमोहन जोशीलाई बग्गीमा राखेर नगर परिक्रमा (फोटो फिचर)
Wednesday November 13, 2019 | |
काठमाण्डौ – वाङ्मय शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीलाई सम्मान गरिएको छ । उहाँलाई ललितपुर महानगरपालिकाले बग्गीमा राखी नगरपरिक्रमासहित सम्मान गरेको हो ।
जोशीलाई उहाँको निवास पाटन बखुम्बहालबाट रथारोहणसहित मंगलबजार, ईटी, कुमारीपाटी, जाउलाखेल हुँदै पुल्चोक पुगेर विशेष कार्यक्रम गरी सम्मान गरिएको हो । कार्यक्रममा कार्यवाहक प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, काठमाण्डौ महानगरपालिका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यलगायत उपस्थित हुनुभएको थियो ।
तस्बिर - रासस
जोशीसहित सय वर्ष पुगेका ज्येष्ठ नागरिकलाई पनि ललितपुर महानगरपालिकाले सम्मान गरेको छ । जोशीको नगर परिक्रमा कार्यक्रममा जनप्रतिनिधि, स्थानीयबासीन्दा, विद्यार्थी, नेपाली सेना, प्रहरी, कर्मचारी लगाएको सहभागीता रहेको थियो ।
बग्गीमा सवार गराउन महानगरपालिकाका मेयर चिरीबाबु महर्जन, उपमेयर गिता सत्याललगायत घरमै पुग्नुभएको थियो । संस्कृति तथा इतिहासविद् जोशी आज एक सय वर्ष पुग्नुभएको छ । ललितपुर महानगरले उहाँको सम्मानमा एक वर्षसम्म विभिन्न कार्यक्रम गर्ने घोषणासमेत गरेको छ ।
यी हुन् भारतका सबैभन्दा धनी सुपरस्टार
बलिउड चलचित्र उद्योगले थुप्रै सुपरस्टार पाएको छ । यी कलाकार आफ्नो अभिनयका माध्यमले दर्शकको मन मष्तिस्कमा बस्न समेत सफल भएका…
दृष्टिमा खोट कि सृष्टिमा ?
संकेत कोइराला । अमेरिकी राष्ट्रपति आइजनहावरले आफ्नो पद सम्हालेपछि उनका नाममा असंख्य उपहार र शुभकामनाहरु आइरहे । यिनै शुभकामनाको भीडमा…
निरू त्रिपाठी भ्यालेनटाइन डे अर्थात् प्रेम दिवशको काउन्टडाउन शुरु भैसक्यो। नेपालमा अहिले यो भ्यालेनटाइन डे यति धेरै लोकप्रिय भइसक्यो कि…
संकेत कोइरालासन्दर्भ ६ दशकअघिको हो । बीपी कोइराला दुई तिहाई जनमत प्राप्त संसदका सर्वाधिक शक्तिशाली प्रधानमन्त्री थिए । चीनको निम्तामा…
राष्ट्रपतिको शपथ आज अपरान्ह ४ बजे
काठमाडाैं । दुर्घटनाले पाइलटको मनस्थिति, काठमाडौंको धावनमार्ग, एटिसीसँगको संवाद र जहाजको अवस्थाबारे प्रश्न १. धावनमार्गसँग पाइलट कति अभ्यस्त थिए ?पाइलटहरूका…
चितवनमा चलचित्र “भोर” को बिशेष शो भव्य रुपमा सम्पन्न
चितवन । दाइजो प्रथामा आधारीत नेपाली चलचित्र “भोर” को चितवनमा बिशेष शो भव्य रुपमा सम्पन्न भएको छ । चितवन नारायणगढको…
काठमाडौँ । नर्सिङ पेशामा आबद्ध भएका र अध्ययन गर्दै गर्दैरहेका स्वास्थ्य परिचारिकाहरुको सौन्दर्य एवं बौद्धिकताको प्रतियोगिता ‘नर्सिङ आईडल’का प्रतियोगी सुन्दरीले…
काठमाडौँ । उपत्यकामा संचालिच सिंगल थिएटरहरुमा बर्ष ०७५ सालको शुरुवातसंगै बक्स अफिस प्रणाली इ टिकेटिङ सिष्टम लागु हुने भएको छ…
लम्फूको प्रचारमा तरकारीवाली
चितवन । चलचित्र लम्फुको रिलिज डेट नजिकिएसगै निर्माण यूनिटले प्रचार प्रसारमा तिब्र पारेको छ । हेटौडामा प्रचारात्मक कार्यक्रम सकेर आएको…